Izizathu ezilungileyo zokuphuma kunye nokuvotela ukhetho
Imiba UMthetho noMgaqo-nkqubo
Kutheni ku funeka abantu bavote?
Ukuvota lilungelo kunye nelungelo
Kungaba ukuma okumangalisayo kumgca - ngokuphindaphindiweyo kwithuba elithile elide - ukwenza into ongayiqinisekanga eya kwenza umehluko. Kwaye ukuba unjengamaMerika amaninzi, usuku lwakho sele lugqityiweyo lugcwele imisebenzi emele yenzeke kunye neempendulo ukuze ungabi naso ixesha lokuma kuloo mgca ukuvota. Kutheni uzibeka kuyo?
Ngenxa yokuba kaninzi kudala umdahluko. Izibonelelo zobunini baseMelika ininzi ilungelo lokuvota ukhetho lwaseMelika, kwaye abaninzi abantu abatsha baxabisa eli lungelo.
Nazi ezinye zezizathu zokuba zimi emgceni, kwaye kutheni ungafuna ukwenza njalo.
Indima yeKholeji yoNyulo
I-College yeKholeji inento ethile ye-rap rap, ngokukodwa kwimizuzu emibini edlulileyo. Idlalwa ukuba iinkokheli zase-US zikhethwa ngabantu ngokuvota amaninzi, kodwa ngaba kunjalo na ukhetho loongameli? Ngaba iKholeji yoNyulo ayiphazamisi ininzi yabantu?
Ewe, ngamanye amaxesha uyayenza, kodwa kungekho rhoqo. Abameli abathathu banyulwe kwiNdlu eNtshonalanga emva kokulahlekelwa yivoti ethandwayo: John Quincy Adams , uRutherford B. Hayes , uBenjamin Harrison , uGeorge W. Bush noDonald J. Trump .
Ngokwenene, abakhethiweyo kufuneka bavotelwe umviwa ophumelele ivoti eyaziwayo kwilizwe abamele. Abemi bahluke ngurhulumente ukuze iikholeji imiselwe ukulungiselela oku. ICalifornia inevoti engaphezulu kweevoti kunaseRhode Island kuba yindlu yabavoti abaninzi.
Ukuba umviwa unqoba uluntu oluninzi olunjengeCalifornia nje ngomgama omncinci, onke amavoti kavoti karhulumente aya kwi-candidate win. Isiphumo? Uninzi lwevoti lonyulo, kodwa mhlawumbi kuphela amawaka ambalwa amavoti athandwayo.
Kwinqanaba, ubuncinane, ukuba umviwa unokufumana ivoti enye eyongezelelweyo.
Xa oku kwenzeka kwiindawo ezininzi ezininzi, zikhulu, kunokwenzeka ukuba umviwa abe namavoti ambalwa adume ukuphumelela kwiKholeji yoNyulo.
Kungakhathaliseki ukuba lo mbimbi, idemokhrasi lilungelo elingafanele lithathwe kalula. Emva koko, iKholeji yoNyulo iphumelele kwivoti eyaziwayo ngokuphindwe kabini kwaye sinama-40 oongameli. Abaninzi abasuka kwamanye amazwe bayazi ukuba ngubani oya kulawulwa yienkokeli ezingakhethiweyo ngabantu ngaso sonke isikhathi, kungekhona nje ukhetho olukhethiweyo. Yingakho abaninzi babo beza kweli lizwe - ukuba babe yinxalenye yesakhiwo sentando yesininzi apho abameli abonyulwa ngabantu. Ukuba sonke siyeka ukuthabatha inxaxheba kwinkqubo yokhetho, urhulumente wethu wentando yesininzi uya kubuna.
Ukuzikhukhumeza Kwilizwe Labo Abahlala Kwakhe
Ukhetho luyenzeka kumanqanaba kazwelonke, karhulumente nakwasekhaya. Ukuthatha ixesha lokuqonda imiba kunye nokuvavanya oko umviwa ngamnye anikezela ngoncedo ukuseka ummandla woluntu kunye nokuthandana kwabafuduki kunye nabemi belizwe lonke. Kwaye ukhetho lonxibelelwano noluntu lwasekhaya lugqitywa luluninzi lwabantu.
Isikhokelo se- USCIS soNyaka sithi , "Abemi banembopheleleko yokuthatha inxaxheba kwinkqubo yezopolitiko ngokubhalisa nokuvota okhethweni." Esifumweni sokwenza ngokwemvelo, abemi abatsha bafungela ukuxhasa uMgaqo-siseko we-United States, kwaye ukuvota luyingxenye ebalulekileyo yalo Mgaqo-siseko.
Akukho mntu uthanda ukuRhafu ngaphandle kokumela
Njengommi wase-US, ufuna ukuthetha apho ukuhlawula irhafu kunye nendlela eli lizwe ngayo. Ukuvota kumntu obonisa imibono eyabelweyo kunye neenjongo zelizwe lakho lilungelo lokuba yinxalenye yenkqubo.
Iyini Inombolo yokuBhaliswa kwabaMnyama (A-Inani) kwiVisa?
Faka isicelo seNombolo yoKhuseleko loLuntu
Amalungelo akho kunye noxanduva lwakho njengesizwe esitsha sase-US
Indlela yokugcwalisa ifom I-751
Iingcebiso zokuzalisa iiFomu ze-USCIS
Funda ngakumbi malunga nokuHlola kweZonyango
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana i-Visa yase-US?
Iingcebiso zokukhetha uMmeli woMfuduki
Kuthatha ixesha elide ukuthatha iVisa?
I-Free Isicwangciso se-Airlift Plans
I-Exclusive: Udliwano-ndlebe noPetru Rubin "Indoda yensimbi" iSield Designer
I-Becas i-estudiar en la universidad en Estados Unidos
Umgaqo-15: Iibhola ezingalunganga kunye neziqingqiweyo
Inkcazo kunye neMimiselo ye-Riddles
I-Palm Springs Architecture, i-Best of Southern California Design
Ukugcina i-Roof Off Game Super Bowl
Iimidlalo ezili-10 zasekhaya zaseKhaya zaseKhaya
I-Biography kaJohn D. Rockefeller
Ukuhamba kwemiDaniso yama-1950
IJografi yeSochi, iRashiya
KwiBritish Open Open
Yonke Into Okufuneka Uyazi NgeSitye
Indlela yokwenza iMonotype kwiiNqanaba ezi-7
I-Top 10 Pro Skater Interviews
Ziziphi iiNdawo zangaphakathi kunye neziNdawo zangaphandle?
Indlela Yokuvakalisa Iingcamango Zokungafaniyo ngeSpanish
Umtshato Nenkolo: Uhlanga okanye Ulungelo Loluntu?